Affinity Photo Developer Kutanga Chikwata Chekugadzira, iyo App yeVagadziri uye Vanojekesa | IPhone nhau
Parizvino muApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwekushandisa kugadzirisa mapikicha, asi mashoma kwazvo awo anotipa sarudzo dzakawanda seAffinity Photo, imwe yeakanakisa mafomu ebasa iri, nekuti rakanangana nehunyanzvi chikamu. Iyi app iri inowirirana neiyo iPad Air 2, iPad 2017 uye ese ePad Pro mamodheru uye inotemerwa pa 21,99 euros muApp Store.
Mumwe wevanonyanya kukonzera kukura kwechikumbiro ichi, Mat Priestley, akaburitsa vhidhiyo paakaundi yake yeTwitter iyo yatinoona. pfupiso yeiyo nyowani Affinity Dhizaini app, kunyorera kwevaratidziri uye vagadziri vanozosvika pane imwe nguva yegore.
Kwakanyarara muhofisi nhasi uye ndiri kunzwa kushata… Ndiani anofarira zvishoma #affinitydesigner #ipad #shakycam teaser? 🐱 pic.twitter.com/ZfbSIJY5Vn
- Matt Priestley (@ mattp4478) July 12, 2017
Muvhidhiyo tinogona kuona kuti Matt Priestley anotiratidza sei mashandiro acho uye mikana yekugadzira yainotipa. Asi chiri kukatyamadza ndechekuti hapana nguva yaanoshandisa Apple Penzura, hatizive kana kuratidza kuti tinogona kushandisa chishandiso pasina ichi chinodhura, kana nekuti akange asina padyo, asi zvingangodaro ichapa kuenderana neApple Penzura.
Iyo chaiyo yekuburitsa zuva reichi chishandiso ichiri kusiri kujeka, asi kuona mamiriro ari iko iko iko application haifanirwe kunge yakareba kusvikira yarova App Store uye uve wechipiri mugadziri app muApple app chitoro. Mazuva mashoma apfuura takakuratidza izvo zvavari iwo akanakisa ekunyorera kudhirowa neApple Penzura, runyorwa rwandichafanirwa kukwidzirisa kana chikumbiro chikatangwa.
Kana iwe uri vashandisi veMac, zvinonyanya kuitika kuti zita reichi chishandiso rinonzwika kujairika kwauri, kubvira inowanikwa yeApple desktop desktop uye ndeimwe yeakanakisa maficha atinogona kuwana kugadzirisa edu mafoto kana kugadzira mifananidzo kubva pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Affinity Photo mugadziri wekutanga Affinity Dhizaini, chirongwa chevagadziri uye vatevedzeri
Bose SoundSport mahedhifoni, akakwana kurovedza muviri